PRADEEP BASHYAL: कोमामा कुमार नगरकोटी [Video]
कोमामा कुमार नगरकोटी [Video]
आख्यानकार कुमार नगरकोटीको नाटक "कोमा : अ पोलिटिकल सेक्स" आजदेखि मार्च महिनाभर दिनहुँ शिल्पी थिएटर, बत्तिसपुतलीमा प्रदर्शन हुँदैछ । अखबारका लेखनमा र त्यसमा पनि अफबिट शैलीका कारण रुचाइएका कुमार नगरकोटीको लेखन भएकाले पनि धेरैले यो नाटकलाई निकै प्रतिक्षासाथ कुरेका छन् । नाटकलाई घिमिरे युवराजले निर्देशन गरेका छन् ।
नाटकको तयारीमा व्यस्त रहंदा हालैको एक साँझ हामीले उनलाई भेटेका थियौं । र, थुप्रै जिज्ञाशा राख्यौं उनको व्यक्तिगत स्वभावदेखि नाटकका बारेमा । प्रस्तुत भिडियोमा राजकुमार बानियाँ, कुमार पौडेल, लुना भट्टराई, अब्दुस मियाँ, अंकित अधिकारी र प्रदीप बस्यालले सोधेका केही प्रश्न र त्यसमा नगरकोटीको उत्तरहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
कोमाको अफिसियल ट्रेलर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
भिडियो सुटिङका क्रममा सघाउने शिल्पी थिएटरका सम्पूर्ण कलाकारहरु एवं निर्देशक घिमिरे युवराजप्रति म निकै आभारी छु । भिडियो खिच्न सघाउने निरज न्यौपाने र सम्पादनमा सघाउने शंकर चैसिरप्रति निकै आभारी छु ।
के भन्छन् कुमार नगरकोटी ?
नाटकमा मेरो प्रवेश अल अफ सडन नै हो। मैले जीवनमा नाटक लेख्ने त परै जाओस्, लेखक बन्छु भनेर पनि सोचेको थिइनँ। सहरमा म विधाभञ्जकका रूपमा कुख्यात छु। नाटकमा मैले र्फमलाई क्राफ्टले भत्काएको छु। हरेक मान्छेमा एक खालको माइन्डसेट छ। त्यसलाई नभत्काई म लेख्न सक्दिनँ। मलाई बदनाम पनि प्रिय छ। म्याडनेस मेरो ब्राण्ड हो । मैले लेखेको म्याडनेसमा सब पात्रहरु मृत छन् तर नाटकमा तिनै जिवन्त हुन्छन् । किनकि म अल्टिमेट म्याडनेसमा गएर लेख्छु ।
नाटक एकदमै एब्सर्ड र एक्सपेरिमेन्टल छ। जीवनका विसंगत पक्षलाई पोट्रेट गरेको छु। कोमामा गएको नाटककारको खोपडीमा चलिरहेका घटना, पात्र र संवाद छन्। फिसरम्यान, एलो ह्याट, डेडम्यान, पोस्टम्यान आदि अफबिट पात्र छन्।
धेरैअघि एउटा नाटक गरेको थिएँ मैले, स्कुले जीवनमा । सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनसमा गार्डको भूमिका पाएको थिएँ। तर, त्यसमा कुनै डाइलग रहेनछ। मैले निर्देशकसँग भनेँ, 'गुरु ! मलाई डाइलग चाहियो।' गुरुले थर्काए, 'सेक्सपियरले तेरा लागि डाइलग नै लेखेका छैनन्, मैले कसरी दिने ?' पछि आफैँले नाटक निर्देशन गरेँ, क्यानभासमा कोरिएको युगको अन्तिम चित्र। मैले निर्देशन गरेको फिल्म भने रिलिज भएन।
धेरैले अब निर्देशन पनि त गर्नेहोला भनेर सोध्छन् । सहरमा थुप्रै थिएटर छन्। राम्रा निर्देशक छन्। सरोज खनालले अमेरिकामा मेरो कथा 'पृथ्वी' मञ्चन गरे। अनुप बराल मलाई नै सरप्राइज दिने ताकमा छन्। अनुप, सुनील पोखरेल, राजन खतिवडा, घिमिरे युवराज, दयाहाङ राईहरू हुँदाहुँदै मैले किन गर्नुपर्‍यो ? बरू म लेख्छु।
घिमिरे युवराजले मेरो म्याडनेसलाई रंगमञ्चमा उतारेका छन् । कलाकारहरूले मस्त अभिनय गरेका छन्। त्यस्तो आनन्द कहिल्यै पाएको थिइनँ । शब्दहरू जीवन्त भएका छन् ।
नाटक सुपरहिट होस् या सुपरफ्लप, यसमा मेरो केही लेनादेना छैन। मोक्षान्तः काठमान्डु फिभर लेख्दा म फिभर नगरकोटी भएँ। फोसिल लेख्दा फोसिल नगरकोटी भएँ। अहिले कोमा नगरकोटी भएको छु। मलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्जोय भएको छ। कुरा यत्ति हो।
(नाटकमा आफ्नो अचानक प्रवेशबारे केहीअघि नेपाल म्यागेजिसँगको कुराकानीकामा आधारित)
Labels: Blogging, Entertainment, interview, Person, Play, Video